Impilo ingcono eChibini(Waterfront)
Seven Sisters Falls, Manitoba, i-Canada
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Pranav
Mayelana nalesi sikhala-(Kulungele Izilwane Ezifuywayo)
Ezimpophomeni zeSeven sisters Falls dam, uzohamba imizuzu embalwa ukusuka e-whitemouth provincial park bese ushayela imizuzu embalwa ukuya e-Whiteshell Provincial park kanye ne-Old pinawa dam yesifundazwe.
Ikheli eliqondile ngu-21 Shaun dale drive,Seven Sisters Fall on winnipeg river!
Futhi ikhabethe lethu libuyela epaki yesifundazwe i-whitemouth, ine-sauna yabantu abayi-8 eshisa izinkuni kanye nebhavu ye-jacuzzi yabantu abangu-2!!
Sisendleleni ye-Snoman, ungakwazi ukupaka izihlibhi zakho ngemuva kwendlu, ufike emfuleni i-winnipeg ngaphansi kwemizuzu emi-2. Isauna yethu evuthayo yokhuni lomsedari, ubhavu we-jacuzzi egumbini lokulala elikhulu, i-BBQ yangaphandle ne-Griddle, isitsha se-Propane Fire senza ikhabethe lethu libe yindawo yasehlobo noma yasebusika! Ikhabethe lethu linemizila ye-Atv eseduze, endaweni yokudoba esezingeni eliphezulu, futhi iseduze kakhulu namagquma egwadle kanye nenkundla yegalofu yephiniwa yabathandi begalofu!!
Ungakhohlwa ukuthi wonke amagumbi okulala anombono wamanzi kanye namahektha ayi-1.6 ezingadi eziluhlaza ezizungezwe izihlahla ezinhle ezindala kanye nedokodo lakho langasese !!
I-Netflix, i-Apple+, i-Disney+, i-Apple Music, i-Prime Video konke kufakiwe.
Uyakwazi ukufinyelela kudokhi entsha sha kwakho futhi ungakhohlwa umzila we-sea-doo!!
Kukhona i-Bluetooth Soundbar ku-gazebo ukuze uphumule
i-sauna, idekhi, noma indawo yokucima umlilo (kufakwe izinkuni) ujabulela izingoma zakho! Izihlalo zepatio ezisanda kuvuselelwa emphemeni ukuze uthole ukunethezeka kwakho kanye nedekhi entsha sha :)
Jabulela i-inthanethi yethu ye-Starlink esheshayo i-WI-FI, i-Netflix, i-Apple+, i-Disney+, i-Prime Video, ne-Apple Music ku-3D 4K TV/Apple TV 4K, enomsindo ozungezile we-Bose egumbini lokuhlala. Ungakwazi kalula ukufanisa idivayisi yakho ukuze ubuke noma yini ku-iPhone noma i-iPad yakho ku-TV futhi.
Sikunikeza izinto eziningi zikagesi nezitsha ongazidinga kanye nezinto ezibalulekile zokupheka. I-pantry eyodwa/shiya eyodwa izonikeza ukukhetha okuzungezisayo kokudla okulula okungahleliwe nokunye okwengeziwe! Sinomenzi wekhofi osezingeni eliphezulu owazi ikhofi. Ikhofi netiye kuhlinzekiwe ukuze uqale. Amanzi okuphuza angamanzi edolobha futhi ayaphuzwa ngokuphelele futhi aphephile ukuwaphuza!!
Kunikezwe amalineni agcwele namathawula, imibhede yenziwe futhi ilungele ukuhamba, ngesitayela saseYurophu. Vele ulahle izikhwama zakho bese uqala ukuphumula! I-shampoo, i-conditioner kanye nokugeza umzimba endlini yokugezela kuhlala kugcwele.
Isakhiwo sokudlala ukuze ugcine izingane zimatasa, futhi ngingumsingathi ovumelana nezimo kakhulu ngakho uma izivakashi zidinga okuthile ukuze zenze ukuhlala kwazo kukhululeke kakhudlwana ngicela ungangabazi ukungishuthela umlayezo!!
Ngingakwazi futhi ukuhlela isikebhe esizimele, uhambo lokudoba oluqondiswayo kanye nokuvakasha kwe-jet ski (ukutholakala okulinganiselwe) ngo-$250 ngosuku(kufakwe amashubhu namathoyizi amanzi). Uxolo awukwazi ukusebenzisa imishini ngaphandle kwalapho unomsebenzisi onolwazi futhi ujabule. ilayisense yobuciko!
Siphinde futhi sinikeze i-Atv eqondisiwe(6 Seat Polaris NorthStar-heated/air conditiong enamathrekhi eqhwa), izindawo zokuqasha imijondolo yokudoba eqhweni, amaphakheji egalofu, uhambo lokuqwala izintaba/ uhambo lokuhamba ngezinyawo, izicathulo zeqhwa, ukushushuluza eqhweni. Sicela usazise kusengaphambili ngaphambi kokwenza ukubhuka kwakho futhi sizozama konke okusemandleni ethu ukwamukela zonke izifiso zakho!
I-Atv side by side(Polaris Northstar heated and air conditioning,6 seater)snowmobile rental(Polaris 800 switchback),izindawo eziqashiswayo zemijondolo yokudoba iqhwa nazo ziyatholakala.Uma ufuna ukuvakasha sicela ungangabazi ukuxhumana nami,ngizozama okusemandleni ami ukwamukela izidingo zakho!
Whiteshell provincial park, old pinawa provincial park, lac du bonnet